ग्राण्डी अस्पतालभित्रको ब्रम्हालुट कहिलेसम्म ? (हेर्नुहोस् भिडियो) « News24 : Premium News Channel
ग्राण्डी अस्पतालभित्रको ब्रम्हालुट कहिलेसम्म ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचार सेवा हो कि व्यापार ? कतिपयले भन्लान् यो सेवा हो । तर निजी अस्पतालको अवस्था हेर्ने हो भनेचाहिँ यो सेवा नभएर व्यापार नै भएको स्पष्ट हुन्छ । किनभने ठूला भनिएका निजी अस्पतालले त सरकारको नीति र निर्देशन नै मान्दैनन् ।
दुइवटा बिल देखाउने
यी ग्राण्डी अस्पतालले जारी गरेका बिलहरु । यी बिलहरुमा ग्राण्डी अस्पतालले ओपिडी टिकट र जाँच गर्नका लागि कसैलाई १ हजार त कसैलाई १ हजार ५० रुपैयाँ लिएको छ ।
बिल नम्बर १ मा हेर्नुहोस्,
राधा पाण्डे नामकी एक बिरामीलाई जाँच गर्नका लागि डाक्टर शुल्क भनेर ४ सय ४२ रुपैयाँ ४८ पैसा लिइएको छ । यो कर बाहेकको शुल्क हो, जसमा ग्राण्डी अस्पतालले १३ प्रतिशत भ्याट लिन्छ जुन ५७ रुपैयाँ ५२ पैसा हुन्छ र कुल ५ सय रुपैयाँ हुन्छ ।
तर ओपीडी टिककै लागि परामर्श भन्दै अर्को ५ सय रुपैयाँ लिइएको छ । डाक्टर राजु पौडेलले परामर्शका लागि भन्दै एउटै बिलमा अर्को ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् भने दर्ता शुल्क भनेर थप ५० रुपैयाँ गरी कुल १ हजार ५० लिइएको छ ।
बिल नम्बर २ मा हेर्नुहोस्,
अनि यो अर्को बिल पनि हेर्नुहोस् । कामना आलेलाई चेकजाँचका लागि भ्याटसहित ५ सय रुपैयाँ लिइएको छ भने न्युरो काउन्सिलिङ भनेर अर्को ५ सय रुपैयाँ लिइएको छ । यसरी एकैदिन एउटै डाक्टरलाई परामर्शका लागि भनेर कामनासँग १ हजार रुपैयाँ लिइएको हो ।
जबकि नेपाल सरकारले भने कन्सल्टेण्ट डाक्टरलाई स्वास्थ्य जाँच गराउँदा अधिकतम ४ सय ७५ रुपैयाँ र कर वा करसहित अधिकतम ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति र निर्देशन छ ।
तर, के बिरामीलाई थर्मोमिटर राखेर, आँखा च्यातेर हेरेको वा आँ गर्न लगाएको थप शुल्क लिन मिल्छ ? हामीले यही प्रश्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा माहाशाखा प्रमुख डाक्टर भोलाराम श्रेष्ठलाई सोध्यौँ ।
उनको यो जवाफ सुन्नुहोस्
जब अधिकतम ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन भने ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले कसरी एकपटक चेकजाँच गराउँदा १ हजारभन्दा बढी लिइरहेको छ त ? के कारवाही हुँदैन यस्तो अस्पताललाई ? श्रेष्ठ भन्छन्, यो ठगी हो र जिल्ला प्रशासनमार्फत् ठगी मुद्दा चल्छ ।
अस्पताल महङ्गो र राम्रो होला । तर सरकारी नीति नियमचाहिँ मान्नैपर्दैन्, दिनदहाडै बिरामी लुट्दा पनि सरोकारवाला निकायचाहिँ किन मौन त ?
फलफूलका बोक्रा किन फाल्नु हुँदैन ?
दश वर्षमा १०२ जना एचआइभी संक्रमितको मृत्यु